Asa fanaovan-gazety : mpanolotra vaovao 8 mianadahy nahavita fiofanana | NewsMada
Asa fanaovan-gazety : mpanolotra vaovao 8 mianadahy nahavita fiofanana
Par Taratra sur 04/06/2016
Mpanao gazety, miisa 8 mianadahy no nahatontosa fiofanana, mahakasika ny tontolon’ny fanoloram-baovao amin’ny fahitalavitra. Nizara ny traikefany, tamin’izany, Jean-Claude Allanic, ilay mpanolotra vaovao tao amin’ny France 2. Maro ny lohahevitra nodinihina sy nohalalinina, nandritra ny herinandro niatrehan’izy ireo izany, toy ny fomba fipetraka, manoloana ny «camera», ny fitondrana adihevitra, ny fampitam-baovao tselatra. Narahina fampiarana hatrany moa ny torohevitra nomen’i Jean-Claude Allanic. Nitondrana fanankianana ho fanitsiana ihany koa izany.
«Nahitana zava-baovao betsaka sy fomba fiasan-dry zareo any am-pita, ny fiofanana. Mety ampiarina tsara amin’ny fanoloram-baovao ny zavatra norantovina teto», hoy David mpanao gazetin’ny Kolo TV, anisan’ireo nanaraka fiofanana.
Tetsy an-kilany, tsy nanafina ny hafaliany ny amin’ny fahakingan’ireo mpiofana, Jean-Claude Allanic, amin’ny fahaizan’izy ireo mandray izany.
Nifanindran-dalana, tamin’ity koa ny an’ireo mpikirakira ny tranonkalam-pifandraisana izay notarihan’i Thierry Sabin.
Marihina fa anisan’ny vy nahitana sy angady nananana, ka nahazoana izao fiofanana izao ny Gepimm sy ny fiaraha-miasany amin’ny Africamedia, any Tours France 24 Nambaran-dRtoa Lalaina Andriantsitohaina Vital, filoha lefitry ny Gepimm fa hitohy ny 24 ka hatramin’ny 28 oktobra izao ny fiofanana ka mahakasika ny Radio sy ny fototry ny fanaovan-gazety ny lohahevitra amin’izany.
Fanabeazana: ironana ny kanto malagasy 17/09/2019
Nahitana fivelarana lehibe: mitombo hatrany ny fitiavana hiragasy 17/09/2019
Fitoriana Filazantsara: naverin’ny Graaf natonta ilay tantara an-kira “Takalo” 17/09/2019